जान्नुहोस, भगवान् शिवको जन्म कसरी भयो ? यस्ता छन् ५ मान्यता ! पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नुहोस – live 60media
जान्नुहोस, भगवान् शिवको जन्म कसरी भयो ? यस्ता छन् ५ मान्यता ! पुराहेर्न फोटो मा किलिक गर्नुहोस
शिव भगवानलाई देवताहरुको देवता पनि भनिन्छ। हिन्दु धर्मका प्रमुख देवताहरू मध्ये प्रमुख देवता को रुपमा शिव भगवानलाई मानिन्छ । भगवानको तीन रूपहरू मध्येको एक शिवलाई वि’ना’शकर्ताका रूपले चिनिन्छ । हिन्दु धर्मका विभिन्न सम्प्रदायहरू मध्ये शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू शिवलाई आफ्नो प्रमुख देवता मान्छन् र त्यसै अनुसार उनलाई महादेव, परमेश्वर आदि नामले सम्बोधन गर्दछन् ।
शिवलाई प्रायजसो शिव लि’ङ्गको रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ । तर, भगवान् शिव जन्मिएका होइनन् प्रकट भएका हुन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ, जुन सायदैलाई मात्र थाहा हुन् सक्दछ पुराणहरूमा भगवान् शिवको उत्पत्ति बारेको केही प्रसंगहरु पाइन्छ ।हिन्दु धर्मग्रन्थ विष्णु पुराणका अनुसार, भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णुको ना’भि(ना’इटो) कमलबाट उत्पत्ति भएका हुन् भने भगवान् शिव विष्णुको शिरको तेजबाट उत्पन्न भएका हुन् । जसकारण उनी सधैँ योगमु’द्रामा रहन्छन् ।एक पटक जब भगवान् विष्णु र ब्रह्मा अ’हं’कारमा परेर आफूलाई श्रेष्ठ बताउँदै झ’गडा गर्न थाले तब बलिरहेको एक खम्बाबाट भगवान् शिव प्रकट भएका थिए ।
एक कथा वर्णन गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार ब्रह्मालाई एक बालकको आवश्यकता थियो । जसकारण उनले तपस्या गरे । तब अचानक ब्रह्माको काखमा एक बालक प्रकट भए । जो रुँदै थियो । जब सो बालकलाई ब्रह्माले रुनुको कारण सोधे । तब त्यो बालकले आफ्नो नाम नभएका कारण रो’एको बताए ।त्यसपछि भगवान् ब्रह्माले उक्त बालकको नाम ‘रुद्र’ राखे जसको अर्थ हुन्छ ‘रुनेवाला’ । भगवान् ब्रह्माले सो नाम दिएर पनि शिवजी चु’प लागेनन् त्यस पश्चात् ब्रह्माले बालकलाई चुप राख्न ८ नाम भने । रुद्र, शर्व, भाव, उ*ग्र, भीम, पशुपति, ईशान र महादेव । जसलाई पृथ्वीमा लेखिएको मान्यता छ ।उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शिवलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए।
भगवान् शिवले ब्रह्माको पुत्रका रूपमा जन्म लिनुको पछाडि पनि विष्णु पुराणमा एक पौराणिक कथा छ । जसका अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्माण्ड जलमग्न थियो तब ब्रह्मा, विष्णु र शिव बाहेक अरू कोही पनि देव या प्राणी थिएनन् । तब केवल विष्णु मात्र जलको सतहमा आफ्नो शे’षना’गमा बसेका हुन्थे ।तब उनको ना’इ’टोबाट कमलको डाठमा भगवान् ब्रह्मा प्रकट भए । ब्रह्मा–विष्णु जब सृष्टिको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका थिए तब शिव प्रकट भए । तर, ब्रह्माले उनलाई चिन्न अ’स्वी’कार गरे। तब विष्णुले ब्रह्मालाई दिव्य दृष्टि दिएर शिवबारे याद दिलाए । त्यस पश्चात् भगवान् ब्रह्माले आफ्नो ग’ल्ती महसुस गर्दै भगवान् शिवसँग क्ष’मा माग्न थाले र शिवसँग पुत्रको रूपमा जन्म लिने आशीर्वाद माग्न थाले ।जब भगवान् ब्रह्माले सृष्टिको रचना आरम्भ गर्न थाले तब उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शिवलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए ।
← OMG:एक, दुई, तीन होइन, यी महिलाले जन्माइन एकैसाथ ६ बच्चा !
मोरङ जिल्लामा फेला परेको यस्तो अनौठो जीव देखेर स्थानीय आश्चर्यचकित [भिडियोसहित] →